Tolow muxuu oronayaa marka la weydiiyo
Tolow muxuu oronayaa marka la weydiiyo.
Qore. Cabdulkarim Xirsi Salaad
Inta aanan mowduuca u galin, waxaa muhiim ila ah in aan wax yar ka tilmaamo arrin ama oraah ay culimada Diinteennu yiraahdaan: Laa yucraful xaqu birrijaal, walaakin alxaqu ablaj-------.
Sidaa awgeed, difaaca xaqa la difaaco haba yaraatee sharaf mooyee ceeb lagalama kulmo. Inta badanna dadka waxaa iska dhex gala mabda’a iyo qofka ama shaqsiyaadka. Mabda’u isagau isma badalo oo waligiis waa jiraa, hase yeeshee waxa is badala aalaaba waa ashkhaasta mabda’aas sheegata oo laga yaabo in duruufo ay ku yimaadaan ay dartood u badalaan mabda’ii lagu ogaa. Mana ahan wax aadamiga ku cusub oo waatan aynu aragno: ruux shalay gaal ahaa, maantana muslim ah. Ama shalay Communist ahaa, maantana liberal ah -------. Mid shalay mujaahid ahaa ayaa maantana camiil gaalo ah. (northern alliance ama isbahaysiga woqooyi ee Afghanistan manta yaa hor kacaya) iyaga maadaama aysan Soomaali ahayn waynu isku waafaqsannahay in wax laga sheego.
Waxaa kaloo inagu adag in aan labada kala saarno oo muhimadda aan siinno kooda mudan (Mabda’a). Sidaa awgeed baad arkaysaa in bulshadeennu aanay uba fiirsanayn waxa uu qabqablaha reerku sameeyo, oo ay dhici lahayd haddii ay mabda’ ka duuli lahaayeen uu mar hore waddada cabi lahaa, waana arrin macruuf ah sida ay ummadda iyo mabda’ la’aanteeda uga faa’ideysteen.
Marka haddaba aynu meelba iska dhigno hebellada iyo ashkhaasta, oo aynu mabda’a muqaawamada iyo Mujaahidiintu ee ku aaddan Mbegathi, ma in la aqoonsado baa iska daa in wax lala wadaago’e mise waa in iyaga iyo Xabashidaba lala dagaallamo oo ay tanaasul ka keenaan dowladnimada ay sheeganayaan!!!
Falsafad iyo dood fara badan taasi uma baahna oo iyagaaba (Mujaahidiinta) habeen iyo maalimba la taagan oo waliba sidii ugu caddayd ku muujiyey dagaal iyo baaruud onkodaysa.
Haddaba, haddaan intaa isla garannay, Shariif iyo cid kale toona micne malahan ee waxa micnaha lihi waa mabda’a muqaawamadu ku dhisan tahay. Sida hadda muuqatana, duruuf kastaa haku kalliftee Shariifku mabda’aas waa uu ka leexday, (Ilaahay xaqa mar kale ha tuso) In uu ka leexdayna waxaan uga hadlay qoraalkaygii hore ee Ceebtii DJibuti, waxaana isku barbar dhigay labada mowqif ee uu kala qaatay Shariifku. Hadday jirtana wax loo sii daba socdaa meesha mataallo.
Taa haddii aan intaa kaga haro. Labada walaal FarxaanW., iyo Dalmar oo u jawaabay C/waaxid, waxay sidoo kale ka hadleen aadna u difaaceen Dr. Xassan Atturaabi oo ah Siyaasi reer Sudan ah walibana nin sheekha ah. Hase yeeshee, waxa ay ku haystaan C/waxed sida iiga muuqata qoraalkooda ma aysan fahmin ujeedadiisa iyo halka uu iska barbardhigayo labada wadaad. Sannadii 2006da bishii Ramadaanka ayaan waxaan daawanayey Tuaraabi oo lagu waraysanayo Aljazeera TV qaybteeda afka carabiga. Waxaa ay ku saabsanayd mowqifkiisa ku aaddan heshiiska dhex maray dowladda Sudan iyo qolyaha Koonfurta. oo uu sheeganayey in ay ahayd siyaasadda xizbigiisa midkan uu qaatay Albashiir. Su’aashii laweydiiyey baa waxay ahayd haddiiba aad sidaas qabteen iyo in aad la heshiisaan Koonfurta, ka waran dadkii boqollaalka kun gaarayey ee aad jihaadka geliseen ee ku nafwaayey ma waxay ahayeen cayaar iyo khamaar siyaasadeed. Inta uu qoslay ayuu ku jawaabay arrintaasi waa arrin siyaasadeed, haddana waqtigeedii waa lasoo dhaafay.
Haddaba tolow Shariifku muxuu oronayaa marka la weydiiyo su’aashan oo kale; Dadkii aynu ku dagaal galinnay wadahadal iyo wax la qaybsi qoladan lala wadaagaa waa xaaraam ee sidaas ku nafwaayey ama ku naafoobay, kuwii ku bara kacay, kuwa ku hanti iyo guryo beelay maxaad ku leedahay. Waxay ila tahay halka uu ka hadlay qoraagu waa halkaas ee ma ahan halka ay la qabateen.
Midda kale, Xizbul mu’tamar alwadani waxaa uu ahaa ururkii uu madaxda ama odeyga ka ahaa Dr. X. Atturabi intii aan la is qaban oo labada loo kala jabin. Ururkan ayaa waxaa xubnihiisa ugu nuhiimsan kamid ah Madaxweynaha Sudan X. Albashiir, Ku xigeenkiisa Cali C. Taha, la taliyaha xagga siyaasadda ahaana W.A.dibadeedkii hore Dr. Mustafa Cusman oo dhammaantoodna ahaa ardaydii Dr. Turabi inqilaab.
Anigu hadda ma garanayo sababaha dhaliyey ama uu salka ku hayo khilaafkooda siyaasadeed walow aan wax ka maqlay, haddana ma ahan wax qoraal lagula soo shirtagi karo. Haseyeeshee, midbaa hubaa iyo Dr. Turaabi uu yahay nin controversial ah ama tanaaqudaada badan oo aan lahayn meel loogu soo hagaago siyaasad ahaan iyo Diin ahaanba. Tusaale ahaan in aan siyaasaddiisu sugnayn waxaa daliil kuugu filan sida aan kor kusoo sheegay dagaalkii ugu dheeraa ee qaaradda afrika oo galaaftay arwaax aad tiro badan oo uu waliba isagu ku tilmaami jirey Jihaad iyo mid Alle lagu raalli galinayo, kadibna uu waxa lagu tilmaamay isdhiibista ku naalooday kuna faanay in ay ahayd isaga fakir uu lahaa. Waliba ogow oo wuxuu fursad usii haystay in uu mucaarado maadaama ay qolada qaadatay mowqifkan yihiin raggii ay siyaasadda isku hayeen.
Tan kale ee ku saabsan sugnaan la’aantiisa xagga Diinta walow tii horeba ay diin lug kulahayd, sida aan kala go’a lahayn ee Culimada reer Sudan ay dhowrkii sanoba mar ugu tilmaamaan in diinta kabaxay oo Zindiiqoobay. Makii ugu dambyesayna waxay ahayd Sannadkan bilowgiisi baan ama kii hore dhammaadkiisii markii uu ka hadlay wax dadka muslimiinta ah ee caamada ahi aanay ka jaahil ahayn iska daa Culimada rug caddaaga ahe; gaar ahaanna markuu ka hadlay gabadha muslimadda ah iyo cidda guursan karta oo uu ku sheegay in Kristan, Yuhuud iyo ciddii ay doonto ay guursan karto. Xijaabka mar uu ka hadlayna waxay iyana keentay in Zindiiq (munaafaq aan is qarin) lagu tilmaamo iyo in uu diinta ka baxay, oo idaacadda Aljazeera ayaaba lagu wareystay qaar kamid ah Culimadii ku gaalnimada xukumtay.
Ma yara fatwooyinka Culimadu ay kasoo saareen Turabi ee ay ku gaalnimo xukumayaan,
Kaba soo qaad in aynan innagu laqabin Culimada taas, in kasta oo ay adagtahay qaadashadeedu, hadddana marba haddii doodba ninka la galiyo Islaam iyo gaal kuu yahay khayr darro intaasaaba ugu filan.
Marka walaalaha difaacay kolley waxaan ku qiyaasayaa in aysan aqoon badan u lahayn maadaama aysan u bareerayn in ay difaacaan ruuxaas oo kale. Waxaase kallifi kara oo kaliya baan is leeyahay dhowrkan arimood oo aan filayo in labada walaal aysan ku sifaysnayn.
Tacasub dhaqdhaqaaqnimo/xarakonimo oo laga yaabo in ay ugu xaglinayaan.
Ama in ay iyaga qudhoodu yihiin kuwo aan ku kalsoonayn diinta in badan oo kamid ah sida duq Turabiba uu Axaadiith aan yarayn u raaciyey, iskaba daaye laga sheegay in uu yiri arimaha qaarkood gaalka ka qaadanayo, laakiinse aanu Nabi Muxamedd ka qaadanayn (waxaa ka mid ah xadiithkii uu C/waxid tilmaamay)
Waxaa intaa soo raaci kara oo kaliya in ay maqleen in uu yahay nin wadaad ah oo aqoon yahan ah yahay reer gabledkuna aysan jeclayn, laakiinse intaa wax dheer oo war ah aanay u hayn.
Waxaan kusoo ururinayaa mar hadday mabaadii’da iyo ashkhaastu aanay mid ahayn, isla markaasna aan ogaannay in mabda’u ka muhiimsan yahay wax kasta oo kasoo hara,, walibana aan tujrubo iyo khibrad ahaamba Bulshadeenna Soomaaliyeed labda oo la isku khaldo cashar lama illaawaan ah kasoo marnay ilaa maantana ay la il daran nahay, malaha ma ahayn in labada walaal ay waqti intaa le’eg iyo energiba ku dayacaan difaaca ashkhaasta ee waxay u qumanayd in ay mabda’a iyo principle-ka qareenno u noqdaan oo aan filayo in aysan kuba bixiyeen taaqadaas cidlada kga luntay.
Cabdulkarim Xirsi Salaad
Faafin: SomaliTalk.com | June 30, 2008 | Updated: July 1, 2008